केपी ओलीको कांग्रेसप्रति आक्रोश – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
झापा,२८ कार्तिक। चुनावी अभियानका क्रममा गृहजिल्ला झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेसप्रति आक्रोश व्यक्त गरनुभएको छ । वाम गठबन्धनले चुनावमा बहुमत ल्याउने देखेपछि कां्रग्रेस हतास भएको बेतुकका तर्क गरेको ओलीको भनाइ छ । ओलीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसले साम्यवाद भनेको के बुझेको छ ? हामीलाई कांग्रेसका कुतर्कहरुका पछाडि आफु कुद्नु छैन ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस यहाँहरुको वाम गठबन्धनले साम्यवाद ल्याउन अग्रसर भएको भन्दै झस्किएको भन्दै ओलीले यो गलत बुझाइ भएको बताउनुभयो । कम्युनिष्ट अधिनायकवाद सहितको साम्यवादसम्म पुग्नकै लागि यो गठबन्धन बन्यो भन्नु कुर्तकबाहेक केही होइन । उनले कांग्रेस हतास भएकै कारण यो कुरा गरेको प्रष्ट पारनुभयो । ‘समान अधिकार, समान अवसर, समान सुरक्षा, समान सम्मानको अवस्था समाजमा हुनुपर्छ। सबैको उन्नति, प्रगति हुनुपर्छ। यो भन्दा नराम्रो प्रणाली भयो ? साम्यवादी प्रणाली अथवा कम्युनिष्ट अन्तर्गतको व्यवस्थामा चीनले गरेको उन्नति, प्रगति र त्यहाँका जनताको जीवनस्तरका बारेमा के भन्छ कांग्रेस ?’ ओलीले उल्टै प्रश्न गरनुभयो।
कांग्रेसले खोक्रा बहस निकालेर चुनाव भाड्ने षडयन्त्र गरेको समेत आरोप लगाए । ‘उत्तर कोरियाले आफूलाई साम्यवादी वा साम्यवादी पार्टी भनेको छैन । उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया किन भन्ने ? किन नभन्ने इदी अमिन ? किन नभन्ने अर्को एउटा तानाशाह? सुहार्तोको कुरा किन नगर्ने ? मार्कोसको कुरा किन नगर्ने ? त्यसर्थ यस्ता खोक्रा बहसहरुमा देशलाई अल्झाउनु भनेको निरर्थक कुराको आश्रय लिनु हो । नेपाली कांग्रेस त्रासबाट ग्रस्त छ। नेप्से परिसूचक घट्छ कम्युनिष्टहरु आए भने जस्ता पिन्चे कुरा हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको सदस्य छ कांग्रेस। तर समाजवादको विरुद्धमा छ’, ओलीले भन्नुभयो।